के राजु सदाको परिवारले न्याय पाउला ? ‘डेढ धुर’ जमिनमा झुपडीमै परिवारको बिचल्ली ! « News24 : Premium News Channel
जनकपुरधाम, १४ असार । अस्पतालकै लापरवाहीको कारण एक किशोरले ज्यान गुमाए ! डाक्टरले समयमा ध्यान दिएको भए बच्न सक्थे उनी ! प्रादेशिक अस्पतालले जीवनजलसम्म नदिएपछि घरबाट नै जीवनजल पठाउने गरिन्थ्याे… !
अब के होला ? राजुले न्याय पाउछ त ! उसकाे परिवारलाइ राज्यले हेर्ला त ? यी यावत सवालहरु अहिले मधेशको चिया र पान पसलमा चर्को रुपमा सुनिएका छन् ।
लापरवाहीका कारण उपचार नपाएर अस्पतालमै छटपटाउँदै प्राण त्यागेका धनुषाका राजु सदाको परिवारमा पीड़ा थपिएको छ । भएको डेढ़ धुर जग्गमा एउटा फुसको झुपड़ी छ र पाँचजना परिवार त्यसै झुपड़ीमा बसेर दिन काट्ने गर्छन् अहिले ।
छानविन टोली राजुको गाउँमा
१६ महिना भारतमा मजदूरी